League of Legends dia mahatratra 1.000 miliara ora amin'ny Twitch | Vaovao momba ny gadget
Twitch, ho an'ireo izay tsy mahalala azy, dia sehatra iray fananan'i Amazon amin'izao fotoana izao (ary manolotra tombony noho ny Amazon Premium) izay manetsiketsika ny vondrom-piarahamonin'ireo mpilalao manerantany, satria maro no milalao amin'ny alàlan'ny streaming ary mampiseho azy amin'ny mivantana mivantana amin'ny alàlan'ity sehatra ity. Ho hitantsika ireo angona mahatalanjona amin'ny ora famoahana sy asehon'ireo mpijery Twitch momba ireo lalao samihafa, araka izany, antenainao fa League of Legends dia tsy isalasalana fa ny fahombiazana indrindra amin'ny lalao video manaraka, izay efa nahatratra adiny 1.000 tapitrisa notsidihina.
Efa ilay orinasa Gamoloco ilay tompon'andraikitra amin'ny famakafakana ny statistika. Azontsika atao ny mahita fa nandritra ny taona 2016 lasa MMORPG malaza antsoina hoe League of Legends no lasa mpitarika tsy iadian-kevitra ny sehatra, tery iray lavitrisa lavitrisa. Saingy tsy izy irery no manana laza be.
Hitantsika fa ny Counter Strike GO no faharoa izay mamokatra ora fijerena betsaka indrindra, mahatratra 523 tapitrisa ora. Dota 2 sy Hearthstone dia tsy ambany loatra koa, miaraka amin'ny 478 tapitrisa sy 471 tapitrisa avy, miovaova toerana tsy tapaka. Na izany aza, ny tena manaitra anay indrindra dia ny fampidirana an-tsekoly tanora iray manontolo, Overwatch dia eo amin'ny laharana fahadimy miaraka amin'ny 178 tapitrisa ora, izay mahatonga antsika haminany fa hitombo izany raha azo atao mandritra ity taona 2017 ity. Toa nahazo laza malaza mendrika ity lalao video ity, raha ny marina ny tale jeneralin'ny Tesla, Elon Musk, dia efa nampahafantatra andro vitsivitsy lasa izay fa ny lalao ankafiziny indrindra hiarahana dia Overwatch tenany.
Andao hojerentsika ny lisitra feno sy ny tarehimarika arosony
League of angano: 1030 M
Counter Fitokonana: Manerantany Offensive: 523 M
lamoria BO3: 123 M
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » League of Legends dia mahatratra 1.000 miliara ora amin'ny Twitch